Fanivànana tranonkala any Afovoany Atsinanana ampiasàna ny Bing, loha-milina mpikaroka an’ny Microsoft · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2010 8:23 GMT
Lahatsoratr'i Tal Pavel nivoaka ny 26 Jolay 2010 tao amin'ny Advocacy
Ny fikarohana natao tany ampiandohan’ity taona ity dia nandalinana ny fivelatry ny sivana aterineto any amin’ny firenena Arabo ary ampiasàna ny loha-milina mpikaroka, Bing an’ny Microsoft hijerena ireo lohahevitra mirona amin’ny firaisana ara-nofo.
Ny loha-milina mpikaroka, Bing dia miasa amina tenimpirenena 41 ary manolotra fanivànana tranonkala mifototra amina fampidiràna mialoha ny tenifototra ho ao anatin’ny rindrambaiko, arakaraky ny firenena samihafa. Amin’io fomba io, ny Bing dia sady ahafahana misoroka ny fampiasana malalaka ny aterineto any amin’ny Faritra Afovoany Atsinanana no manao fikarohana ireo lohahevitra mirona amin’ny firaisana ara-nofo – amin’ny teny Anglisy sy Arabo..
Ny fanadihadiana dia natao teo anelanelan’ny 2 hatramin’ny faha-15 Janoary 2010, tamin’ny alalàna ny fijerena tenifototra Arabo miisa 100 ary 60 amin’ny teny. Ilay lisitra dia sady nahitàna ireo lohahevitra miresaka firaisana ara-nofo, no sady nisy koa ireo tsy misy ifanraisany mihitsy amin’ny resaka firaisana ara-nofo (horohoro, herisetra, politika, zon’ny vehivavy sy ny Fivavahana). Ny asam-pikarohana dia tanteraka nampiasàna ny loha-milina fikarohana Bing tany amina firenena efatra, izay mitrandraka amin’ny fomba samihafa ny fanivànana ny: Ny Emira Arabo Mitambatra, Siria, Alzeria ary Jordania.
Ny vokatra dia nampiseho fa ny loha-milina fikarohana, Bing, dia nanivàna ireo lohahevitra amin’ny teny Arabo sy Anglisy izay làlana nahafahan’ireo mpampiasa nitsidika ireo votoatin-javatra momba ny firaisana ara-nofo sy ny LGBT. Ny andrana natao dia naneho fa ny loha-milina fikarohana, Bing, dia manivana ihany koa ireo tenifototra amin’ny teny Anglisy rehefa mitady sary.
Eo am-panatanterahana fikarohana iray ampiasàna ny iray amin’ireny tenifototra ireny dia ampahafantarina ny mpampiasa (amin’ny teny Arabo na Anglisy) fa ny vokatry ny fitadiavana dia mety hiaty zavtra voatokana ho an’olon-dehibe, voafaritra arak any lamina natao ho an’ilay milina mpikaroka arakaraky ny faritra na ny firenena.
Ny milina mpikaroka, Bing, dia tsy mamela ireo mpampiasa any Afovoany Atsinanana ho afaka hifehy ny fanivànana na handingana ny fampiasàna azy. Amin’ny lafiny iray, ny fanadihadiana dia namoaka far ha misy mpampiasa any Afovoany Atsinana nisafidy ny hampiasa andiany natao ho an’ny iray amin’ireo firenena Tandrefana amin’ilay loha-milina, dia tsy voasivana ilay lisitra noresahana teo.
Ny fanivànana aterineto ataon’i loha-milina mpikaroka Bing dia tsy feno; mbola mijanona fotsiny amin’ny votoaty miresaka firaisana ara-nofo sy ho an’ny andiana liha-milina mpikaroka natao ho an’ny eo an-toerana ao Afovoany Atsinanana.Na izany aza, na dia, porofo mivaingan’ny ezak’ireo governemanta any amin’io faritra io hanakana tranonkala aza ity hetsiky ny Microsoft ity, voalohany indrindra noho ny antony fikajiana ny soatoavina ara-moraly, ny kolontsaina sy ny finoana eo amin’ny fiarahamonina ao an-toerana.
Indrisy anefa, abaribarin’ity fanadihadiana ity ny anjara asan’ireo fikambanana toa ny Microsoft amin’ny resaka fanivànana ny aterineto sy ny ezak’ireo governeùanta any Afovoany Atsinanana hangeja ny fahalalahan’ny aterineto any Afovoany Atsinanana.